People : Ruby comédienne, Diane Audrey Ngako prennent la défense de Shakiro le phénomène, la toile s’enflamme - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Dadka: Jilaaga Ruby, Diane Audrey Ngako waxay difaacaan ifafaalaha Shakiro, canvasvans canvas
Dadka Dadka, waxay dhowr bilood ahayd hadda in ifafaalaha Shakiro uu helayo heer sare shabakadda 237. Arrin layaab leh oo layaab ku noqotay qaar markii ay u qalmaan dadka kale, laakiin taasi waxay ku dhammaatay inay gaadho paroxyn maalmo ka hor, markay ahayd fal galmo cad oo nin dhalinyaro ah oo khaniisiin furan ah ayaa soo dhoweeyay dadka reer Kamroon inay soo toosayaan subax wanaagsan oo bisha ah. October. Ku soo dhowaada qulqulka buugaas oo aan ka tegin dadka daciifka ah ee sarreenka.
Haddii aad taageere u tahay baraha bulshada, waxaad u badan tahay inaad aragtay ama aad maqashay Shakiro. Wiilkan dhalinyarada ah ee reer Cameroon ee taariikh nololeedkiisa muujiya ee khaniisnimadiisu tahay, ayaa ah cadhada websaydhka. Laga soo bilaabo luqadiisa cayiman, manias-kiisa hal-ku-dhegga ah iyo muujinta dhaqankiisa Ma ahan Xirmooyinka Maammaaa! ", Ninkani wuxuu abuuray dabeecad si aad ah ula socota Facebook. Waxaa jira bog halka ku dhawaad ​​macaamiisha 7 500 ay aqoon u leeyihiin noloshiisa maalinlaha ah.
Waddan uu khaniisnimadu mamnuuc ka tahay sharciga (Qodobka 347-1 ee Xeerka Ciqaabta ee Cameroon - « Waxaa lagu ciqaabayaa xabsi bilo ah 6 bilood 5 sano iyo yicib u dhexaysa 20 000 iyo 200 000 frs cfa, qof kasta oo galmo la sameeya qof jinsi ah ") Shakiro wali wuxuu sameeyaa biilka. Tanina walow ay jiraan hadaladiisii ​​iyo isku dhacyadii kala duwanaa ee uu bulshada la lahaa Lyrus Motassi, youtubeur qurux u sharaxeysa nafteeda " Samee fanaaniinta reer Cameroon ee xiisaha u qabta farshaxanka ". " Nin isagu moodkiisa u eg Oo yaa ah U samee sida naag ahaan si ay u muujiso awoodda farshaxankeeda ".
In kasta oo si gaar ah looga sii gudbo, Shakiro, oo hadda ah dhacdo dhab ah oo websaydh ah, ayaa ku xumayn doonta karti-xirfadeedkii Juunyo ee la soo dhaafay iyadoo la soo bandhigayo natiijada kaydinta Wandant. Ka tagista madow illaa caddaanka kaliya bilaha 1, ninku wuxuu ahaa mid aan la aqoonsan karin. Tani waa fursad lagu xasuusiyo dhammaan dadka Wanda in isticmaalka alaabada laydhka ay khatar weyn ku tahay caafimaadka. Ilaali muuqaalkaaga ooh, waa Ilaah kan wax siiya!
Laakiin shirkii Wandante ayaa yimid waxyar usbuuc ka hor markii, subax sida kuwa kale, fiidiyoow naxdin leh oo ku saabsan galmada Shakiro ay ku faafisay shabakadda. Sawirrada aad uga badbaaday baahinta si aadan ugu xadgudbin dareenka laakiin aad u gelisay Zinternets. Waa in la sheegaa in ficil celinta ay dhinacyadu ku kala qaybsameen, inta khaniisnimada ah ee Shakiro ay qaadatay cabirku ma noqon karo mid ka sii palpable. Intii lagu jiray dhaleeceynta adag ee midba midka kale ka dhanka ah Shakiro, Wanda Boy wuxuu awooday inuu helo difaacyo qaab ah Diane Audrey Ngako, Ganacsade baaxad leh oo caan ku ahaa goobta "Booqo Afrika", oo bartiisa twitterka ku qoray "29" Oktoobar ee la soo dhaafay:
Muuqaal aragti fog laga haysto
ururiyey shabaggii shabagyada.
Cadhada ka dib siidaayay cinwaankan ayaa waxa kale oo ay horseedday in qofka ugu weyn uu raalli gelin ka bixiyo meel fagaare ah, oohin iyo joogitaan hooyadiis ah, ka dib markii la garaacay.
Aad uga xanaaqsan daaweynta ay heshay Shakiro, Ruby Aktarada ayaa ka xanaaqday xanaaq ay ku muujisay boggeeda Facebook. Iyo xitaa haddii daabacadaha maanta la waayey, internetku waligiis ma iloobin:
« tani waa
maantana waad ogtahay waxa sharciga lagu ciqaabayo? Meeqo ayaad joogtaa
ixtiraam sharciga dalkaan imisaad u baahantahay inaad ixtiraamto sharciga? Munaafaqu
in aad tahay... khaniisnimada
maahan cudur laakiin hanuuninta galmada. Yaad tahay inaad si xun u dulmid, ceebeyso, ku dhufato qof aadane ah waa
sida aad jeceshahay uun inuu khaniis yahay? Noloshaadu way fiicantahay? Ilaah baa leh
Garsooraha la magacaabay goorma? Hadduu dembi ku jiro dhibaatadaadu maxay tahay
heer? Waxaan rajeynayaa dullahaad aad u sameyneyso ninkan dhalinyarada ah
maanta berri adiga ayaa bixin doona adiga iyo carruurtaada.
Qof bini aadam ahi ma mudna taas. Ku alla kii weligiis dembaabin
dhagxaan ku tuura. Xaqiiqdii waa la i caayayaa sida caadiga ah tani waa
Horaa layga bartay. Waan ka xunahay inaadan raacin tirada
kaliya in la raaco, waan ka xumahay inaadan la garab joogin garsoorayaasha dhulka. I
waxaan ka soo horjeedaa dulmiga, dullinimada Waan ka xumahay laakiin ma awoodo
iska dhig dhinaca kuwa caayaya. Waxaan ku nool nahay duni ay kalluumeysatadu ku noolaadaan
xukumaan kalluumeysatada kale inay si ka duwan u dillaaceen.
Ha ilaawin inaad sidoo kale ceebeyso kufsiga ilmaha ee aad adigu leedahay
guryahaa halkaas ku yaal. Waad ogtahay tontons-ka waaweyn, ilma adeer Papas ... iwm yaa kufsada
walaalahaa, walaalahaaga, hooyooyinka ... iwm
Waxaa wax laga xumaado ah, caddaaladda dadku marna ma jirto ...... pfff ".
Sidii la filaayay, jawaab celintu ma dheeraynin, qaar ayaa soo bandhigaya maqaalka caanka ah ee 347-1 ee Xeerka Ciqaabta iyo kuwa kale, Baybalka si fudud. Laakiin Wanda Peeps, sheekadu halkaas kuma joogsanayso. Wareeg cajiib ah maxaa yeelay, in la aamino qoraalka codka ee hadda ku faafaya shabakadda oo aan ku aqoonsaneyno codka Shakiro, wax walba waxay muujinayaan in duulimaadka shaashadiisa loo diyaariyey.
Hey ah, ganacsiga buzz!
Iyada oo aan gabi ahaanba dib ugu laaban jagooyinkeedii, Diane Audrey Ngako ayaa cusboonaysiisay fikirkeedii ka dib markay dhegeysatay qoraalka cod-bixinta.
Wanda Dadka dhamaadka, inkasta ookhaniisnimada Shakiro wuxuu hada cadeyn karaa cadeymaha, waxaay wali kujirtaa in maanta uusan maraynin garsoor. Wax kasta oo kiciya su'aalaha ku saabsan dulqaadka masuuliyiinta ee dhacdooyinka taban ee aadka u yar ee ka dhaca Cameroon.
Maxay kula tahay waxaas oo dhan
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.jewanda-magazine.com/2019/11/people-ruby-comedienne-diane-audrey-ngako-prennent-la-defense-de-shakiro-la-toile-senflamme/